Izinto eziluncedo:umoya olungileyo kakhulu; Yiba nakho ukubamba ubushushu; Ayakwazi ukufunxa amanzi; Inokuba kungangeni manzi; Ibhetyebhetye; Ayisiyeki; Zive ulunge kakhulu kwaye uthambile; Xa kuthelekiswa nezinye iimaski, ukuthungwa kukhanya kancinci; I-elastic kakhulu, inokuncitshiswa emva kokunweba; Ixabiso eliphantsi, elifanelekileyo kwimveliso yobunzima.
Inqanaba lokuzikhusela le-mask ye-KN95 inqanaba
Ikliphu eyakhiwe ngeplastiki yempumlo, ilungele zonke iintlobo zobuso.
Ukwahlulahlula iphakheji yecala eliqinileyo, usike umoya ngokufanelekileyo kumacala omabini.
Ngaphantsi komaleko wokuzahlula, ukusebenza okucacileyo kwemihlathi ye-Angle efileyo.
Iiglavu ezingasetyenziswanga zingenazintsholongwane
Akukho nyango lwe-powder yokunciphisa i-allergy
Inokuthintela ukubakho kokungcola konxibelelwano okubangelwa ziigloves zomgubo kwaye kunciphise kakhulu imeko yeallerg
Umphezulu weiglavu ugxunyekwe kancinane ukuze wandise ukubambana
Iigloves zenziwa ngokuchanekileyo kwaye azivuyi
Ukusasaza umanzi ngesandla
I-75% ye-sanitizer ye-sanitisizer yesandla esinobutywala ibulala ngokufanelekileyo i-99.99%, ingalimazi isandla sakho
2. Ndinakho ngempumelelo nangokukhawuleza
3. Ukuthamba kunye nokungacaphukisi, akulimazi ulusu
Ungahlambi ngamanzi, kulula ukonga amanzi
4. Ijel ukuthungwa, unokulilawula ngokulula inani. Ubungakanani obuncinci, kulula ukuthwala
I-Kn95 kunye ne-N95 yokuphefumla inenqanaba elifanayo lokukhuselwa, kodwa landela kuphela imigangatho yovavanyo yamazwe ahlukeneyo. I-Kn95 masks ilandela imigangatho yamaTshayina kwaye iimaski ezingama-N95 zilandela imigangatho yaseMelika. Ukusebenza kwabo kokukhuseleka kwezinto ezingenayo ioyile (amasuntswana e-sodium chloride yokuvavanya) akukho ngaphantsi kwama-95%.
Ingubo ekhuselayo elahliweyo ibhekisa kwizinto ezikhuselayo ezilahliweyo ezinxitywa ngabasebenzi bezonyango xa bedibana nodidi A okanye abaguli abanesifo esosulelayo phantsi kolawulo lweHlobo A olusulelayo.
Ilaphu elithe tyibilikisiwe liyinto ephambili kwimask. Eyona nto iphambili kwilaphu elinyibilikisiweyo yi-polypropylene.
Njengoko igama lisitsho, ngumtya onqabileyo osetyenzisiweyo kwimask ukulungisa imask kwibhadi yempumlo.
Ke ngoko, ibhulorho yeempumlo ikwabizwa ngokuba yiplasitiki yempumlo epheleleyo yempumlo - ubambo lwempumlo - ibhulorho yeempumlo.
Umsebenzi wemoya yomoya luphawu kwimaski yeentambo zemaski.
Kwindawo yokusebenza eshushu neyomswakama enomoya omncinci okanye umoya omninzi wabasebenzi, ukusetyenziswa kwemaski ye-anti haze enevalve yokuphefumla kunokukunceda uzive ukhululekile xa ukhupha umoya.